ညနေခင်းသတင်းများ ( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်)
ညနေခင်းသတင်းများ ( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်) 4.5
■ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ■
( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်)
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ
- ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးလာနိုင်ကြောင်း ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေသတိပေး၊
- အချိန်မနှောင်းခင် မျက်လုံးဖွင့်နားစွင့်နှလုံးသားခံစားကြည့်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယန်ဟီးလီပြော၊
- လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မြန်မာအစိုးရလက်မခံကြောင်း သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြော၊
- မင်းပြားမြို့နယ်ပန်းမြောင်းတောင်ကြောမှာ တပ်မတော်နဲ့ AA တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာသုံးရက်ရှိသွား၊
- ARSA လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ မောင်တောကဟိန္ဒူတွေအတွက် နှစ်နှစ်ပြည့်ဆုတောင်းပွဲလုပ်၊
- မန်းဝန်ကြီးချုပ်ပုံတွေနဲ့လှောင်ပြောင်ရေးသားတဲ့ Facebook Group ဖွင့်သူတွေကို ၆၆ (ဃ) နဲ့ တရားစွဲ၊
- တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပိုများလာကြောင်း ND-Burma ထုတ်ပြန်၊
-------- စတဲ့သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်ရမှာပါ။
တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile App
Author — mie kyaw
Saffron does not lose sight. Yan failed to understand Myanmar situation.
Author — Yarzar Thingyan
နစ်ပေါင် ၄၀ ဆယ်ကျော်နေပီ
Author — zaw ဆက်သာလုပ်ပါ
ဘာသာရေး အဓိကရုန်းဖြစ်အောင် စစ်အစွန်းရောက်က ဖန်တီးပြီး NLD အစိုးရက ကာကွယ်ပေး နေတာပါ
Author — Tun Tun
Now the Saffron group's givingahint that they do not support the Pyin-Ma-Nar Bamar Military Government.
Author — A Channel
အောင်ပြည့်နင့်စွမ်းကဘား fb ကိုဖန်တီးတာ ကြံ့ဖွတ် အစီစဉ်ပါ ဘာကြောင့်ဆိုရင် 2008 ခြေဥက ဝေဖန်တာကြောင့်ပါ
​AA ကို ​လေယာဉ်​သုံးပြီ တိုက်​ခိုက်​ မှု အ​ပေါ် ပြည်​သူ​တွေ က အမှန်​တကယ်​ စိုးရိမ်​ ကြတာလား? RFA က စိုးရိမ်​ တာကို ပြည်​သူ ​တွေ နဲ့
RFA က အမှန်​တကယ်​ စိုးရိမ်​ ရင်​ ကြိမ်း​သေ​နေပါပြီ။
AA ​နောက်​က လက်​မဲကြီး
RFA ကို​ငွေ​ကြေးအကုန်​ခံ ရှင်​သန်​​စေသူ လက်​မဲကြီး
ခိုင်းရင်​ ရမယ်​သို့​သော်​×× ကြာမယ်​​နော်​။
Author — Thaw Ka
ARSA army are not terrorist the ARSA Army fighting about the freedom and justice for all Rohingya.
Author — Umar A.R
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂ဝ မေ ၃ဝ ညပိုငျး)
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂ဝ မေ ၃၁ မနကျပိုငျး)
WHO ကနေ အမရေိကနျနှုတျထှကျမညျ
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး AA နဲ့ အစိုးရရဲ့ မတူညီတဲ့အမြင်
အမေရိကန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကို နိုင်အောင်ကိုင်တွယ်ဖို့ သမ္မတပြော